'နေရယ်၊ လရယ်၊ အမှန်တရားရယ် ၂' ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲကို သရုပ်ဆောင် များစွာဖြင့် မကြာခင် ထပ်မံ ရိ?? - Yangon Media Group
‘နေရယ်၊ လရယ်၊ အမှန်တရားရယ် ၂’ ရုပ်သံ ဇာတ်လမ်းတွဲကို သရုပ်ဆောင် များစွာဖြင့် မကြာခင် ထပ်မံ ရိ??
ရန်ကုန်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၉
အကျင့်ပျက်ခြစားခြင်း၊ အကြမ်းဖက်ခံရခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်း၊ မြေယာမှတ်ပုံတင်ခြင်း ပြဿနာရပ်များနှင့် အကြွေးဆပ်ရန်အတွက် အတိုးကြီးကြီးဖြင့် ချေးငွေရယူပြီး ငွေတိုးချေးသူတို့၏သားကောင်ဖြစ်သွားရခြင်းအစရှိသည့် တရားမျှတမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို အဓိကထားရိုက်ကူးမည့်’နေရယ်၊ လရယ် အမှန်တရားရယ် ၂’ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို မကြာခင် ထပ်မံရိုက်ကူးတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ’နေရယ်၊ လရယ်၊ အမှန်တရားရယ် ၂’ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ကူးပုံဖော်တော့မည်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို ဇန်နဝါရီ ၂၉ ရက်တွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ Rose Garden Hotel ၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ‘နေရယ်၊ လရယ်၊ အမှန်တရားရယ်’ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲကို ၂ဝ၁၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီး ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင်ပြသခဲ့ကာ ယခုအခါတွင် အပိုင်း၂ အနေဖြင့် ဒါရိုက်တာ အောင်ကိုလတ်၊ သရုပ်ဆောင် ဆုပန်ထွာ၊ မိုးယံဇွန်၊ ဘုဏ်းသိုက်၊ နေယံ၊ ခင်ဇာခြည်ကျော်၊ ပွင့်နဒီမောင် အစရှိသော အနုပညာရှင်များမှ ပါဝင်ရိုက်ကူးကြမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲနှင့်ပတ်သက်ပြီး အနုပညာရှင်များ၏ စကားသံအချို့ကိုလည်း စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်ပါသည်။
”ကျွန်တော်တို့ ပထမဦးဆုံး ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးရိုက်ဖို့ ကျွန်တော့်ကိုလာပြောတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်လည်း သိပ်ပြီး တော့ မရှင်းဘူး။ ဥပဒေက ဒီလောက်တောင်ပဲ လိုအပ်နေလား ပေါ့နော်။ ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီလိုတွေးတာလဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က စီးပွားရေးနယ်ပယ်နဲ့ အနုပညာနယ်ပယ်မှာပဲ ကျင်လည် နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီနယ်ပယ်ကို မေ့နေတာပေါ့နော်။ ဒီ ဇာတ်လမ်းတွဲကို ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာ အခက်အခဲအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ အခြေအနေကလည်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ်ကလုပ်နေရင်းနဲ့ ဒါကမှားပါတယ်ဆိုပြီးတော့လာပြောတဲ့ ပညာရှင်တွေရှိခဲ့တယ်။ အမျိုးမျိုးကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ ဒုတိယအပိုင်းအနေနဲ့ ထပ်မံရိုက်ကူးခွင့်ရပါတော့မယ်”
”ကျွန်တော်ကတော့ အရင်အပိုင်း ၁ တုန်းကအတိုင်းပဲ အခုအပိုင်း ၂ မှာလည်း ရဲတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရမှာပါ။ အမှန်တရားကို မြတ်နိုးတဲ့သူတစ်ယောက် အမှန်တရားအတွက် ကူညီတတ်တဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရမှာပါ”
”နေရယ်၊ လရယ်၊ အမှန်တရားရယ် ၂ ဇာတ်လမ်းတွဲလေးကို ပြန်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ မပန်စိတ်ထဲမှာ ငါတို့တော့ဗဟုသုတတွေရတော့မယ်။ တစ်ခါတလေကျရင် မပန်တို့က အလုပ်တွေအရမ်းများနေတဲ့အခါကျတော့ ဥပ ဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ သက်သက်စာအုပ်တွေဖတ်ဖို့ဆိုတာက မလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ အခုတော့ ဒီဇာတ်လမ်းတွဲလေးပြန်ရိုက်တော့ မယ်ဆိုတော့ ဖတ်ရတော့မယ်။ နောက်တစ်ခုက ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ မပန်ရဲ့ဇာတ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ မေနှင်းဆီရဲ့ ဇာတ်ကောင်ကာရိုက်တာ နည်းနည်းလေးခက်တယ်”
''အိချောက မိန်းကလေးဆန်တဲ့ ကာရိုက်တာတွေကို သိပ်မကြိုက်ပါဘူး'' အိချောပို
မန္တလေးမြို့ ကျောက်တော်ကြီးဘုရား၌ ပထမအကြိမ် ရွှေကြာသင်္ကန်း ရက်လုပ်ပွဲနှင့် ထမနဲ ထိုးပြိုင်ပ??
မြောက်ကိုရီးယားသည် နျူကလီးယား လက်နက်များအတွက် လောင်စာ ထုတ်လုပ်မှုများ တိုးချဲ့နေဟု အမေရိကန
အန္တာတိက ဝင်ရိုးစွန်းဒေသတွင် ရေခဲများပျော်ဆင်းမှု ၁၉၈ဝ ပြည့်နှစ်များကထက် ခြောက်ဆမြင့်တက်
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ဟိုတယ်၊ တည်းခိုခန်းနှင့် မိုတယ်များ၏ မီးဘေးလုံခြုံရေး စတင်??
ဥရုဂွေးနှင့်ပွဲတွင် အမ်ဘာပီ ခြေစွမ်း ထပ်ပြဦးမည်ဟု မာတူဒီယုံကြည်၊ ကာဗာနီ ပါဝင်ကစားနိုင်ရန
ပိုးမွှား တိရစ္ဆာန်တို့၏ တောင်ပံခတ်သံကဲ့သို့သော အသံများကို ပန်းများ ကြားနိုင်စွမ်းရှိကြောင?